ओली ‘पोलिटकल जोकर’ हुन्, सूर्य चिह्‍न र नाम नपाए कयामत आउँछ : प्रचण्ड
२९ पुष २०७७, बुधबार १५:०८
काठमाडौं । नेकपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पोलिटिकल जोकरमा परिणत भएको बताएका छन् ।
काठमाडौं जिल्लाले आयोजित गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एक सय जनाभन्दा कम केन्द्रीय सदस्यको बैठकले एक हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने नौटंकी गरेको बताएका छन् ।
उनले भने, “एक सयजना भन्दा कम केन्द्रीय सदस्य भएको भेलाले एक हजारभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने कस्तो विक्षिप्तता हो ? ४४१ भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य रहेको नेकपामा २१९ जना भए मात्रै गणपुरक संख्या पुग्छ । तर, एक सयजनाभन्दा कम केन्द्रीय सदस्यको भेलाले पार्टीको विधान संशोधन गर्ने कस्तो नौटंकी हो यो ?”
संघीयता र संविधान एम्बुसमा छ, हामी उखानटुक्का सुनाउन र प्रहसन गर्न आएका होइनौं : प्रचण्ड
विक्षिप्त र बहुलाहटका कारण मुलुक संकटतर्फ गएको बताएका छन् । उनले भने, “हामी निर्वाचन आयोगमा पनि गएका छौं । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पनि पल्टायौं । आयोगले पनि जे तथ्य हो, त्यही फैसला हुन्छ भनेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य संख्या जहाँ हुन्छ त्यो आधिकारिक हुन्छ र अर्को समूहले नयाँ पार्टी गठन गर्नसक्ने आयोगले विश्वास दिलाएको छ ।”
उनले संविधान, ऐन, कानुनअनुसार पार्टीको नाम र सूर्य आफ्नो समूहको हुने दाबी गरेका छन् । उनले भने, “त्यसो नभएको अवस्थामा कयामत आउँछ । केपी ओलीले संविधान मिचेर अघि बढेका छन् । यहाँ पार्टीको नाम र सूर्य नपाएमा यहाँ आँधिबेहरी आउँछ । हामीलाई भरोसा छ, राजनीतिक जोकर र नौटंकी पछाडि कोही लाग्‍ने छैन ।”
“उहाँले हामीले भगौडा भन्‍नुभएछ; सुन्‍न पनि कान के थुन्‍नु ? आँखा के छोप्‍नु ? लाजैमर्दो । ७२ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको अध्यक्ष भगौडा र ३० प्रतिशत पनि नभएको रैथाने ? केपी ओलीको भन्दा अन्त कतै हुन्छ ?,” प्रचण्डले भने ।
प्रचण्डले पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई काम गर्न नदिएका विषयहरु र मुद्दाहरु कुन-कुन हुन्, यो सार्वजनिक गर्नसमेत चुनौती दिएका छन् ।
अमेरिकी सांसद बर्नी स्यान्डर्स कसरी बने भाइरल ?
कांग्रेस चुनावबाट भाग्दैन, सर्वोच्चले गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुन्छ : शेखर कोइराला
सीमा विवाद समाधानका लागि भोलि भारत-चीनबीच नवौं चरणको सैन्य वार्ता हुँदै
युरोपमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभाव, दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम स्थगित
सिरमको कारखानामा लागेको आगलागीबाट एक हजार करोडभन्दा बढीको क्षति
कञ्चनपुर पुगेर महामन्त्री कोइरालाले भने– वैशाखमा चुनाव हुँदैन
व्यवस्थाकै लागि भनेर अर्को लडाई लड्ने नेपालीको चाहना छैन : प्रदीप पौडेल
साकुरामा पलाइरहेका ऐंजेरुहरु
अमेरिकी सेना : जो बाइडेनले माफी मागे, जीलले दिइन् धन्यवाद
इमाडोल, ललितपुर फोन: ९८६३०३०९५५ इमेल: [email protected]
Copyright © 2021, All Rights Reserved - Lekhajokha News | Powered By Goldenmud Creation